Yakakwana Dhata haina Kukwanisika | Martech Zone
Kushambadzira munguva yemazuva ano chinhu chinonakidza; nepo webhu kushambadzira kushambadzira kuri nyore kwazvo kuteedzera kupfuura echinyakare mishandirapamwe, kune ruzivo rwakawanda rwuripo zvekuti vanhu vanogona kuoma mitezo mukutsvaga kwemamwe data uye 100% ruzivo rwakarurama. Kune vamwe, iyo nguva yakachengetedzwa nekukwanisa kukurumidza kutsvaga huwandu hwevanhu vakaona kushambadzira kwavo pamhepo mukati memwedzi wakapihwa zvinorambidzwa nenguva yavanopedza kuyedza kuona kuti nei manhamba enzira dzemigwagwa asinganyanyi kuwedzera.
Kunze kwekusakwanisa kwedatha yakakwana, kune zvakare huwandu hwe data iri kunetsa. Muchokwadi, pane zvakawanda zvekuti dzimwe nguva zvinogona kunetsa kuona sango remiti. Ini ndinofanira kutarisa iyo bounce rate kana yekubuda mwero? Chokwadi, peji mutengo chinhu chakakosha che data, asi pane zvirinani zvirinani izvo zvinogona kuratidza kuti zvakadii peji rakapihwa rezvinhu rakakosha mukuzadzisa chinangwa chepamhepo? Mibvunzo haigumi uye ndiyo mhinduro. Nyanzvi inogona kukuudza, "zvinongoenderana", asi munhu ane musoro wake mumhute yedigital analytics vanogona kufunga kuti pane yakakwana seti yenhamba kana vakangotarisa kuburikidza nezvose.
Munzvimbo mbiri idzi, mhinduro iri nyore - ita nekukanganisa nekuti data rakazara uye / kana data rakazara hazvigoneke. Mumwe wevakomana anotaura nezve izvi zvakanyatsonaka ndiAvinash Kaushik. kana iwe usingazive zita, iye New York Times anotengesa zvakanyanya muimbi, mumwe wevakuru veGoogle uye ari mubhodhi reMayunivhesiti akati wandei. Yake blog, Occam's Razor, igoridhe chairo kune wezuva ranhasi muongorori wedhata uye ini nguva pfupi yadarika ndakamhanyira mune imwe yeake ekare mavara anonzi, Yechitanhatu Nhanho Maitiro Ekuchinja Yako Mental Model. Mariri, anotsanangura pfungwa yekuti hapana seti yedata rakakwana uye vanhu vanofanirwa kutevera nzira iri nyore kwazvo ku "Virtuous Data".
Kubva pane ese makuru mapoinzi aanogadzira, iyo inonamira zvakanyanya ndeiyi:
… Basa rako haritsamiri pane data ne 100% kutendeka pawebhu. Basa rako rinoenderana nekubatsira kambani yako Kufambisa nekukurumidza uye Funga Smart.
Inotevera nguva iwe yaunotakura kumusoro maAnalytics, ingo rangarira kuti kana iwe uri kushanda neyakanaka dhata uye watevera zvakanakisa maitiro, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kutora danho rekuti ungaenda kumberi Nekuti zvisinei nemabatiro aunogona kuita iwe mukutsvaga yakakwana uye yakakwana data, iyo nguva yawakapedza uchizviita ingadai yakashandiswa mukushandurwa kwemitengo, uchigadzira bvunzo nyowani, nezvimwe. Unoziva, zvinhu zvinobatsira kambani yako kukura uye chengeta basa rako.
Unoda kutanga hurukuro? Svika kwandiri pa Twitter @sharpguysweb.
Tags: AnalyticskutendeukaDataEmail MarketingKutendekanguva